मलको हाहाकार अन्त्य गर्न देशमै कारखाना खोलौं : डा. बाबुराम भट्टराई – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/मलको हाहाकार अन्त्य गर्न देशमै कारखाना खोलौं : डा. बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं, १७ भदौ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको हाहाकारलाई अन्त्य गर्न देशमै कारखाना खोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
भट्टराईले मंगल बार ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, ‘प्रत्येक वर्ष हुने मलको हाहाकार अन्त्य गर्न भारत,बंगलादेश र चीनसंग संयुक्त लगानीमा नेपालमै कारखाना खोलौं ।’
उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘मल बढी उत्पादन हुने खाडी मुलुकसंग सम्झौता गरेर सिधैं आयात गरौं । तेलमा झैं मलमा पनि भारतसंग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर आयात गरौं ।’ भट्टराईले देशभित्रै प्रांगारिक मल प्रबर्धन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ । नेपालमा समयमै मल आपूर्ति हुन नसक्दा हाहाकार भएको छ।
किसानका लागि यो नयाँ समस्या भने होइन। नेपालमा बर्सेनि धानबालीका समयमा युरिया मलको चर्को अभाव हुन्छ। अन्नको बाला फलाएर देशको पेट भर्न दिनरात खेतमा पसिना बगाउने किसानले कतिपय जिल्लामा मलको माग गर्दा कुटाइसमेत खानु परेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ। कृषि प्रधान मुलुकमा यसभन्दा लज्जास्पद विषय हुनै सक्दैन।
खेतीका लागि किसानलाई चाहिने सामान्य मलसम्म उपलब्ध नहुनु कृषि प्रधान मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। बर्सेनि बर्खे धानबालीको समयमा युरिया मलको चर्को अभाव हुँदा पनि यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्नु अझ दुःखद् पक्ष हो। यसले सरकार कृषकको समस्याप्रति उत्तरदायी एवं संवेदशील नभएको सन्देश प्रवाह हुन्छ।
३५ ब’र्सिय आ’न्टीलाई घु’म्न जानी र फेसबु’कमा बोल्ने केटा साथीको खोजी चाहाना हुनेले यसरि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस.
अरब सागरमा विकसित सामुद्रिक आँधीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना
थप ७ हजार ४२५ जनामा कोरोना पुष्टि, मृतकको संख्या ६ हजार ५ सय नाघ्यो